Adobe Proto: Taabo ku-qaadashada tabtaada | Martech Zone
Adobe Proto: Taabo ku-qaadashada tabtaada
Talaado, Nofeembar 22, 2011 Douglas Karr
Adobe wuxuu bilaabay suite ah taabashada codsiyada ku habboon Android kiniin. Waa wax fiican in Photoshop, Debut, Fikradaha iyo Kuler ay ku sii socdaan kiniinka oo ay ku habboon yihiin isdhexgalka taabashada, laakiin ma hubo inaan dhab ahaantii ku faani karo farta jidkeyga dhexdooda runtiina aan wax soo saar badan leeyahay (gaar ahaan tan iyo markii aan nuugo at Photoshop).
Hal codsi, oo lagu daray Adobe Creative Cloud runtii taasi aniga wey isoo taagtay waxay ahayd Adobe Proto. Awoodda dufanka raadiyaha qaabka is-dhexgalka isticmaalaha waa mid cajiib ah. Waxaan isticmaalnaa LucidCharts hadda iyo jecel awoodaha iskaashiga. Si kastaba ha noqotee, Proto waa codsi la yaab leh… gaar ahaan $ 10.
Waxaan sugayaa inaan arko Adobe Proto oo ka dhigaya iPad-ka!
Tags: adobe cloud CloudAdobe protokiniin
Jooji Malo Inaan Ku Aqaan!
'Waqtiga Ayaa Shaqeyn Doona
Feb 4, 2012 markay ahayd 4:41 PM
Suuq geyn & wax soo saar xun! Waa inaad isticmaashaa adeegooda daruuriga ah $ 149 / bishii si aad ugula wadaagto faylasha kombuyuutarka, ma keydin kartid feylka kaniinkaaga oo ma isticmaali kartid sdcard ama usbdrive, ama emayl.
Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo kale oo bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad wax la mid ah ku sameyso bilaash oo aad ku wareejiso faylasha bilaash ah.
Waxaan la hadlay Adobe dhowr jeer, xitaa shaqaalahoodu waa wax aan caddayn, waxay leeyihiin koox android ah, laakiin ma yaqaanaan wax badan, ama iibin ka hor, ama taageerada tiknoolajiyada. Ugu dambeyntii wiiggii 1 kadib waxaan helay emayl sheegaya in aysan macquul ahayn in lala wadaago faylal ka baxsan adeegooda qaaliga ah ee daruuraha.
Markaa 90% dadka isticmaalaa ma heli karaan faylashooda si ay u koraan daruur kasta. Adobe wax caawimaad ah malahan iyaga, sidaa darteed adeegsadayaashu waxay leeyihiin jawaab-celin la'aan, arrimo farsamo oo aan lagu xallin golayaasha adobe iyo taageerada.
Waa inay ku siiyaan bilaash 10GB ama wax, barnaamijyadan ayaa ah kuwo guuldaraystay sababtan awgeed, ha ku khasaarin lacagtaada.
Feb 5, 2012 markay ahayd 7:06 PM
@ google-dff452fb3bf20c4d2d9780305703bb9f: disqus - aad baad ugu mahadsantahay wadaagida macluumaadkaas! Runtii waa nasiib daro. Waxaan bilaabayaa in aan isweydiiyo in Adobe ay waxoogaa dhibaato ah ka haysato aqoonsi iyo in kale.